Mpanakanto sary mamadika ny sarin'ny zanany ho sary hosodoko nomerika | Famoronana an-tserasera
Paul gondar | | mpanakanto
Mpanakanto sary mamadika ny sarin'ny zanany ho sary hosodoko nomerika mahazo valiny mampino mahavariana feno ny sary an-tsaina ny zaza an'ny ankizy manokana, tetik'asa mahaliana sy hafa miaraka amina paika mahagaga izay hahatonga antsika ho tsy azo atokisana ny tsarovy ny sary nataontsika tamin'ny fahazazantsika, Hanao ahoana ny sary ataon'ny zanakao raha nanao toy izany ianao?
Isika rehetra Fony mbola zaza isika dia nanao sary isan-karazany izay tsy azon'ny olona atao intsony ary tsy nisy tahotra, noho io dia sary tsy manam-paharoa sy tena famoronana ny sary. ny ankizy manana iray izy ireo fahaizana tsy manam-paharoa hahita an'izao tontolo izao amin'ny fomba hafa, izany no nahatonga ireo sary nataontsika tamin'ny mbola kely fa tsy scribe, fa tena zavakanto. ATSINANANA Ny artista holandey dia nanova ny kanton'ny zanany taloha ho lasa kanto matihanina amin'ny ho avy. Tetikasa tena mahaliana ary mpanakanto hafahafa indrindra.
Mpanakanto holandey Telmo Pieper teraka tamin'ny 1989 dia namorona tetikasa sary mahaliana mifantoka amin'ny fialamboly sary an'ny ankizy, Mamindra amin'izao fotoana izao ireo sary nataoko fony aho mbola kely. Amin'ity fomba fahitana vaovao ity dia namerina ireo sary ireo i Telmo tamin'ny alàlan'ny sary azo aseho izay naneho ny tsy manan-tsiny toy ny zaza mitambatra teknika matihanina asa sy ezaka nandritra ny taona maro.
Azontsika jerena ny fomba Telmo dia namadika ny tsorokadiny tsotsotra ho sary an-tsary mahatalanjona. Mahaliana ny mahita ny sary roa ary mahatsapa ny fomba miova ny fahitana an'izao tontolo izao rehefa zaza isika, Amin'ireo vanim-potoana ireo dia mametra ny tenantsika hisolo tena ny zava-drehetra amin'ny fomba misimisy sy tsotra kokoa isika, zavatra sarotra io rehefa olon-dehibe isika satria matetika no mampiseho ny zavatra rehetra amin'ny fomba vita sy sarotra kokoa.
Ny asany dia tsy mifantoka amin'ny famoronana zaza fotsiny fa amin'ny koa katalaogin'ny tetik'asa sary tena mahaliana feno fisainana. Ao aminy pejy manokana afaka mahita ny tetikasanao rehetra amin'ny fomba milamina izahay.
Asa iray hafa tena mahaliana amin'ity mpanakanto ity dia azy ireo graffiti goavambe izay ataony ao amin'ny tetikasa Telmo Honey, graffiti goavambe manaitra eo amin'ny endrik'ireo trano no mahavita mampiseho sary manaitra sy manaitra. Telmo Pieper dia mpanakanto mendrika ny ho ao amin'ny katalaogin'ny referansa famoronana.
Azonao atao ny manaraka an'ity mpanakanto ity amin'ny tambajotran-tserasera:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Mpanakanto sary mamadika ny sarin'ny zanany ho sary hosodoko nomerika